देव आवारा भोजपुर, हाल कोरिया कोहि देशमा ईतिहास बनाईरहेछन् कोहि त्यसैको विपक्षमा कराईरहेछन्। पाउनेले पाए कि पाएनन् होला राहत ?दात्रि निकायहरुले भने पठाईरहेछन्। लास भेटिएपछि यहि प्रमाणित भएको हो ,हत्यारा उस्कै दर दाजू भाई रहेछ
प्रकाशित मितिः भदौ 30, 2075
आजको नेपाली गजलको वास्तविकता
लेख प्रा.डा. भीम खतिवडा धरान गजल :पहिचान र परीक्षणआज यति धेरै जनप्रिय बन्न पुगेको गजल वास्तवमा एउटा निश्चित सैद्धान्तिक संरचना र आयाम भएको साहित्यिक काव्यिक विधा नै हो। यसका आफ्नै संरचनासम्बद्ध वैधानिकता र सीमाहरू छन्। हरफहर�
पञ्चायतकाे त्याे तिज र लाेकतन्त्रकाे याे तिज
यति बेला म ५७ बर्षको भए । गाउघरका कुरा लगभग म ७&divide;८ बर्षको हुदाँ देखिकोे हेक्का राख्न थालेको थिए । म ७&divide;८ बर्षको हुँदाको कुरा स्मरण गर्ने हो भने, आज भन्दा लगभग ४९&divide;५० बर्ष अघाडीका दिनहरु रहेछन् । आज नेपाली दिदी&ndash;बहिनीहरुबाट आफ�
प्रकाशित मितिः भदौ 29, 2075
हराउदै मातृभाषा(सम्पादकीय )
कुनै पनि मानिसको अस्तित्व नामेट पार्ने हो भने उसको मातृभाषा र पहिचान समाप्त पार्नुपर्छ भनिन्छ । तर पछिल्लो समय आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कृति, संस्कार र पहिचान हराउदै जान थालेको छ । बिगतमा गाउघरमा जुन जातिको बढी बसोवास हुन
बीपीको बेतिथि हटाऔं(सम्पादकीय )
पुर्वकै ठुलो स्वास्थ्य संस्था बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पछिल्लो समय त्यहा भित्रको बेतिथीले थिलथिलो भएको छ । प्रतिष्ठान भित्र हुने टेण्डर ठेक्का पट्टामा हुने अनियमितता संगै त्यहा भित्र कार्यरत कर्मचार�
असुरक्षित नेपाली आकाश की हेलिकोप्टर ?
सन् १९४८ मा बेलायती नागरिक एच वेल्डरले पहिलो पटक नेपाली आकाशमा जहाज उडाए । नेपाली आकाशमा दुर्घटना भने नेपालमा विमान सेवाको इतिहासभन्दा अगाडि ७ मे १९४६ वेलायती सेनाको डकोटा&ndash;३ सिमरामा दुर्घटना भयो ।तर मानवीय क्षति हुने गरी ने�
खुशी बाढ्न नपाएको नीलमको त्यो दिन
पाल्पामा जन्मीएकी नीलम कार्की निहारीका जव उनको &lsquo;चिरहरण&rsquo; उपन्यास पुरस्कृत भएको दिन साहित्यकार दाहाल यज्ञनिधीले योगमायाबारे खोजी गरेर लेख भने पछि उनी उनीको विषयमा अनुसन्धानमा लागेकी थिईन । दाहालको प्रेरणाले ठूलो जोखिम मो�
एउटा कमिलो एउटा भित्तामा निरन्तर चढीरहन्छ अन्ततः सफलता प्राप्त गरेरै छोडछ । यस्तै हो एउटा उदेश्य र लक्ष्य लिएर अघि बढीरहदा एक दिन पक्कै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहारण वन्नुभएको छ इटहरीकी लक्ष्मी खडका । पनौतीबाट इ�
सामाजिक सञ्जालमा बहस
स्वास्थ्यकर्मीको स्वभावमा परिवर्तन हुनुपर्यो(सम्पादकीय )
सेवाग्राहीले राम्रो सेवा पाउनु उसको अधिकार हो भने सेवा दिनेले पनि राम्रो सेवा दिनु उसको जिम्मेवारी र दायित्व हो । तर सरकारी कर्मचारीहरुले पनि सर्वसाधरणलाई सेवा दिदा जसरी दिनुपर्ने हो त्यो जिम्मेवारी बहन गरेको पटक्कै देखिदैन
प्रकाशित मितिः भदौ 21, 2075
लिभीङ टुगेदर : समस्यामा महिला
ललितपुर । पोखराकीे १६ वर्षीया एक किशोरी अहिले दुई जिउकी छन् । उनको पेटमा ७ महिनाको गर्भ छ । बिहे गर्ने आश्वासन दिएर दुई वर्ष सँगै बसेका उनले श्रीमान ठानेका व्यक्ति भने सम्पर्कमा छैनन् । उनी पोखराको एक डान्सबारमा डान्स गर्थिन् ।
प्रकाशित मितिः भदौ 20, 2075
जनताले स्वीकाने कर लागु गर(सम्पादकीय)
यतिबेला धरान उपमहानगरपालिकामा करको विषयलाई लिएर एक पक्ष बिरोधमा उत्रिएको छ भने धरान उपमहानगरपालिका भने नया लागु भएको कर बैज्ञानिक भएको दावी गदै आएको छ । करको विरुद्धमा विभिन्न आन्दोलनहरु भईरहेका छन् । तर पनि धरान उपमहानगरपाल
राज्य र पर्यटन क्षेत्र
लम्जेल सङ्घर्षशीलकेन्द्रीय सदस्य ,प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय संस्कृति र प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो । संसारका मानिसहरुमा नेपाल घुम्ने आकांक्षा पाइन्छ । अहिले हाम्रो देश आइ एन जि ओ मार्फत विश्
महिला संञ्जालको उदाहारणीय काम(सम्पादकीय)
तीजमय भईरहेको बेलामा महिला संञ्जाल धरानले भने बेग्लै तरिकाले तीज विषेश कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । आईतबार देखि सुरु भएको महिला उद्यमी मेला २०७५ आज समापन हुदैछ । महिलाहरुले तीज पर्वमा भडकिलो तरिकाले मनाउदै आएको कुराको चर्चा �
अस्पतालको समस्यालाई सम्बोधन गर(सम्पादकीय)
पुर्वकै ठुलो अस्पताल कहलिएको विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा यतिबेला समस्यानै समस्या सृर्जना भएको छ । प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउने बिरामीले उपचार नपाउने त छदैछ । यो संगै प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षहरुमा व�
प्रकाशित मितिः भदौ 18, 2075
हाम्रो विकास कता जाँदै छ
अहिले सरकारको मुख्य नारा भनेको सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल हो । अब हामि समाजवाद तिर हाम्रो लक्ष संझिनु पर्छ भनेको बेलामा हाम्रो तिन ओटै तहका सरकारले लिने लक्ष भनेको समाजवाद उन्नमुख कार्यक्रम बनाउँने हो । यसो भन्दा अब मुलुकलाई कसर
प्रकाशित मितिः भदौ 17, 2075
संकृतिको प्रर्वद्धन गरौ तर मागेर होईन(सम्पादकीय)
संकृतिको प्रर्वद्धन गरौ तर मागेर होईनयतिबेला पुर्वका विभिन्न शहरमा एक प्रकारको उत्सवनै छाएको छ । ढोल झयाम्टा अनि मखुट लगाएको लाखे नाचले साच्चै पुर्वका नेवार समुदायको बसोवास रहेको शहर बजारहरु लाखेमय भएका छन् । लाखे नाच एउटा ज�
प्रकाशित मितिः भदौ 15, 2075
नयाँ कानुनमा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको कानुन तथा न्याय प्रणालीमा मुलुकी ऐन लगायत १३ ऐनहरु र अन्य धेरै ऐनका थुप्रै दफाहरुलाई प्रतिस्थापन गरेर रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट २०७४ सालमा जारी भई २०७५ साल भाद्र १ गते बाट लागु भएको देवानी तथा फौजदारी संहितामा �
प्रकाशित मितिः भदौ 14, 2075
चाडपर्व भडकिलो बन्नुहुदैन (सम्पादकीय )
यतिबेला हिन्दु महिलाहरुले विषेशरुपमा मनाउने पर्व हरितालिका तीजको संघारमा छौ । तीज आउनु भन्दा अघिनै बाटो घाटो, पार्टी पौवा मठ मन्दिरमा रातो सारी र रातो पहिरन अनि तिलहरी लगाएर दिदी वहिनीहरु धुमधामले रमाईलो गरीरहेको देख्नसक्छौ
प्रकाशित मितिः भदौ 13, 2075